I-Alhambra eseGranada ivulela iTorre de la Pólvora emphakathini ngoSepthemba | Izindaba Zokuhamba
Maria | | I-Granada, Izaziso
Njengoba bekulokhu kwenziwa kusukela entwasahlobo edlule, iBhodi labaPhathiswa be-Alhambra kanye neGeneralife yaseGranada livulela umphakathi ngendlela evelele enye yezindawo ezizimele ze-Alhambra. Labo abavakashele inqaba yeNasrid ezinyangeni ezedlule bazobe sebekwazile ukubona iTorre de la Cautiva, iTorre de los Picos kanye neHuertas del Generelife. Ngalesi sikhathi sekuyithuba lePowder Tower, elizovulwa ngenyanga kaSepthemba.
Uma uhlela ukubaleka eGranada futhi uhlela ukuvakashela i-Alhambra enhle, sikukwazisa ukuthi ubheke okulandelayo lapho sizothola khona izimfihlo zeTorre de la Pólvora kanye nenqaba.
1 Yini iPowder Tower?
2 Izici zePowder Tower
3 Amahora okuvakasha ePowder Tower
4 Thenga amathikithi e-Alhambra
5 Ukwazi i-Alhambra eGranada
6 I-Alhambra ilithathaphi igama layo?
Yini iPowder Tower?
Kutholakala e-Alcazaba, eningizimu yeTorre de la Vela, iTorre de la Pólvora iphuma odongeni. Lo mbhoshongo omncane wangezikhathi eziphakathi nendawo ubenendima efanelekile ngalesi sikhathi ezingeni lokulawulwa kwendawo. Ngaphansi kobuKristu ibiphinde futhi isebenze njengengxenyekazi yezikhali nendawo yokugcina izinto. Ukusuka lapho ithola igama eliyilondolozayo njengamanje, iTorre de la Pólvora, njengoba kuchazwe yiBhodi ye-Alhambra neGeneralife yaseGranada. Kodwa-ke, kunemibhalo evela ngekhulu le-XNUMX lapho ibizwa khona njengeTorre de Cristóbal del Salto.
Izici zePowder Tower
Ngokungafani neminye imibhoshongo ye-Alhambra eseGranada, iTorre de la Pólvora incane ngosayizi. Kodwa-ke, ibinomsebenzi obaluleke kakhulu futhi lokho ukulawula abahlaseli abangene ngomkhombe owawusezinyaweni zawo. Njengoba ukwazi ukubona, iPowder Tower ibinenani elikhulu lamasu njengoba yayinjalo enyakatho-ntshonalanga ngokweqile futhi yathuthuka kancane maqondana nolunye udonga.
Eduze kweTorre de la Pólvora ungabona ingxenye yodonga oluxhuma i-Alhambra eGranada neTorres Bermejas.
Amahora okuvakasha ePowder Tower
IPowder Tower izovulelwa izivakashi ngoLwesibili, ngoLwesithathu, ngoLwesine nangeSonto phakathi kuka-8: 30 ekuseni no-20: XNUMX ntambama. lwenyanga kaSepthemba. Umthamo ulinganiselwe kubantu abangama-30 ngasikhathi sinye abathenge ngaphambili ithikithi le-Alhambra General noma ithikithi le-Alhambra Jardines.
ITorre de la Pólvora imele enye yezakhiwo ezithile kakhulu zenqaba eyaziwayo kanti uSepthemba yinyanga ephelele yokwazi.
Thenga amathikithi e-Alhambra
Amathikithi okuvakashela i-Alhambra eGranada angathengwa ku-inthanethi, emahhovisi amathikithi esikhumbuzo uqobo, nge-ejensi yezokuvakasha eyi-ejenti egunyaziwe noma ngocingo. Kufanele ukhumbule ukuthi uma unikezwe inani elikhulu lokuvakashelwa elinakho ngonyaka, amathikithi kufanele athengwe phakathi kosuku olulodwa nezinyanga ezintathu ngaphambi kosuku olukhethiwe, kepha ngeke athengwe ngosuku olufanayo.
Ukwazi i-Alhambra eGranada
Uma iGranada yaziwa okuthile emhlabeni wonke nge-Alhambra yayo. Yakhiwa phakathi kwekhulu le-1870 nele-XNUMX ngezikhathi zombuso waseNasrid, njengenqaba yamasosha nedolobha lasePalatine, yize yayibuye ibe yiNdlunkulu YamaKhristu yaze yamenyezelwa njengesikhumbuzo ngo-XNUMX. Ngale ndlela, i-Alhambra yaba yindawo yokuheha izivakashi ezibaluleke kangangoba yaze yaphakanyiswa ukuthi kube neNew Seven Wonders of the World.
I-Alcazaba, iRoyal House, isigodlo sikaCarlos V kanye nePatio de los Leones ngezinye zezindawo ezaziwa kakhulu e-Alhambra. Kunjalo nezingadi zaseGeneralife ezisegqumeni laseCerro del Sol.Into enhle kakhulu ngalezi zingadi ukuxhumana phakathi kokukhanya, amanzi nezimila ezijabulisayo.
Okuhlaba umxhwele ngempela nge-Alhambra eseGranada ukuthi kuwo wonke umlando wayo kube nezinguquko ezishiye uphawu kulokho eliyikho namuhla: esinye sezikhumbuzo ezinhle kakhulu eSpain ezikhethe ukuba yisimanga esisha somhlaba eminyakeni embalwa edlule.
Ingesinye sezikhumbuzo ezivakashelwa kakhulu zaseSpain futhi okuhehayo akukhona nje kuphela ekuhlobiseni okuhle kwangaphakathi kodwa futhi nokuthi i-Alhambra iyisakhiwo esihlangana ngokuphelele nezwe elizungezile.
I-Alhambra ilithathaphi igama layo?
NgeSpanish 'i-alhambra' isho 'inqaba ebomvu' ngenxa yombala obomvu owatholwa yisakhiwo lapho ilanga likhanya ekushoneni kwelanga. I-Alhambra eseGranada itholakala egqumeni iSabika, phakathi kwezindonga zemifula iDarro neGenil. Lolu hlobo lwezindawo zedolobha eziphakeme luphendula esinqumweni sokuzivikela nesezombangazwe ngokuhambisana kakhulu nomqondo wasendulo.
Ngaphandle kokungabaza, i-Alhambra inendawo enhle, lapho izindinganiso zayo zokwakha zihlangana khona futhi zivumelane kahle nezwe elizungezile. Ukuze ukwazise kangcono, kungakuhle ukuthi uye endaweni yase-Albaicín (iMirador de San Nicolás) noma eSacromonte.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » I-Granada » I-Alhambra eseGranada ivulela iTorre de la Pólvora emphakathini ngoSepthemba
Yini okufanele uyibone futhi uyenze edolobheni laseBrussels I